तपाई सामान्यतया ब्रान्डीको स्वाद कसरी लिनुहुन्छ? - समाचार-गोआलोङ रक्सी (समूह)
तपाई सामान्यतया ब्रान्डीको स्वाद कसरी लिनुहुन्छ?
तपाई सामान्यतया ब्रान्डीको स्वाद कसरी लिनुहुन्छ? ब्रान्डी पिउनका लागि वास्तवमा धेरै फरक तरिकाहरू छन्, र विभिन्न तरिकाहरूले विभिन्न अनुभवहरूको नेतृत्व गर्नेछ। धेरै ब्रान्डी प्रेमीहरूले यसलाई सफा गरेर पिउन रुचाउँछन्, ब्रान्डी गिलासहरू तयार पार्छन् र एक गिलासमा ब्रान्डी र अर्कोमा बरफको पानी खन्याएर।
पिउँदा, आफ्नो हातमा ब्रान्डी गिलासको पर्खाल समात्नुहोस् र तपाईंको हत्केलाको न्यानो गिलासलाई अलिकति न्यानो पार्दै ब्रान्डीलाई न्यानो पार्दै र यसको सुगन्धलाई वाष्पीकरण गर्न अनुमति दिनुहोस्। पूरै गिलास भर्नुहोस्, एकै समयमा सुँघ्ने र पिउनुहोस्, साँच्चै ब्रान्डी पिउने चमत्कारहरूको आनन्द लिन। ब्रान्डीको प्रत्येक सानो चुस्कीको साथ, ताललाई ताजा गर्न बरफको पानीको एक चुस्की लिनुहोस् र ब्रान्डीको अर्को चुस्कीलाई अझ सुगन्धित बनाउनुहोस्। जब तपाइँ सास लिनुहुन्छ, ब्रान्डीको सुगन्ध तपाइँको मुखमा लामो समय सम्म रहन्छ।
धेरै केटीहरू पनि ब्रान्डी पिउन मन पराउँछन्, तर तिनीहरूमध्ये धेरैले आफ्नो पेयमा ब्रान्डी थप्न मन पराउँछन्। मैले एक पटक साथीहरूसँगको पार्टीमा Goalong ब्रान्डी XO को गिलास खाएँ र मेरा साथीहरूले आफ्नो ब्रान्डीमा कोला थप्न मन पराएको फेला पारे। मिश्रणको स्वाद धेरै विशेष छ र धेरै मानिसहरूले यो पेय ककटेल पिउनेसँग तुलना गर्छन्, एक धेरै गलत समानता।
यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने, हातमा राम्रो रक्सीको गिलास लिएर एक्लै स्टूलमा बस्नु राम्रो हुन्छ, संगीत सुन्दै र सानो चुस्की लिँदा। आफ्नो समय लिनुहोस् र ब्रान्डीको सुगन्ध र समृद्धि महसुस गर्नुहोस् तुरुन्तै तपाईंको नाक र मुखको वरिपरि घुम्छ, के तपाईंलाई यसको स्वाद कसरी थाहा छ?
अघिल्लो: व्हिस्की मिसाउँदा कस्तो पेय राम्रो हुन्छ?
अर्को: फिल्म हेर्दै मूल दिमाग सम्झनुहोस्, सही समयमा अगाडि बनाउनुहोस्